Farmaajo Waa Maqaar Saar Marin Habaabin Ah W/Q C/llaahi Somaali. – Bogga Calamada.com
Farmaajo Waa Maqaar Saar Marin Habaabin Ah W/Q C/llaahi Somaali.
Baadida nin baa kula day dayi daalna kaa badane oon dooni hayn in aad heshaa daa’in abidkaaye.
Tuducyadaas abwaan soomaaliyeed ayaa horay u yiri waxayna ku fadhiyaan qeyma weyn maxaa yeelay waxaanu ka baraneynaa cashar intii fayow anfacaya.
Waxaa loosoo qaada karaa cid kastoo isku dayaysa in aad ku wiiqanto xaalad xun oo aad ku jirto isla markaana geed dheer iyo mid gaabanba u fuuleysa in aadan ka bixin, geesta kalena bihinbis iyo beerlaxawsi aan uurka jirin kula dul hoganeysaa si aad ugu dhagranto oo aad ugu qaadato in ay guushaada iyo horumarkaada jeceshahay oo ay aayahaada ka shaqeynayso.
Maxaan ku tilmaami karnaa ninkii asigoo sheeganaay masâ€™uul soomaaliyeed hadana afka inoo saaraya tubta guul darrada si qolo kale oo lid nagu ah guusha u hanato?.
farmaajo (muwaadinka maraykanka ah ee jinsiyadiisii hore soomaali ahayd) ahna madaxweynaha dowladda federaalka ah ee shisheeyuhu danihiisa u dhistay, sow ma oran karno waa adeegaha gumeysiga deriska iyo midka caalamiga ah wuxuuna isku dayayaa in uu umadda soomaaliyeed ka dhaadhiciyo in uu u beer naxayo oo aayahooda iyo gobanimadooda difaacayo?.
Farmaajo miyaanuu ahayn ninkii markuu raâ€™iisalwasaaraha ahaa lahaa dagaalka aan muqdisho uga jiro waxaan ku difaacayaa New York (magaalo weyn oo maraykanka ka tirsan)?
Waxaanu leenahay waa asigii oo weli mabdii shalay iyo kuwo la mid ah ximbaarsan qorshihiisuna waxaa weeye in uu si daacadnimo ku dheehan tahay u gutto howshii loo xil saartay si mar kale loogu abaal mariyo in uu kursiga ku fariisto.
miyaanu ahayn ninkii markii madaxweynaha loo doortay lahaa dowladaha deriska ah ma fara gelidoono, taasoo micneheedu yahay dhulka iyo dadka soomaliyeed ee itoobiya iyo kenya haystaan dood kama qabo dalalkaas ayayna ka mid yihiin?.
Waa asigiii oo weliba ay u dheertahay in uu markaa kadib tegay labada dal ee gumeystayaasha ah ee kenya iyo itoobiya madaxdoodana kula soo heshiyay wada shaqeyn iyo in ay wada jir ula dagaalamaan mujaahidiinta soomaaliya ka jihaadaya ee doonaya in ay umadda ka dul qaadaan arxanlaayaasha gumeysiga ah iyo kaaliyaashooda ka dhigan eeyo lagu ugaaranayo.
miyaanuu ahayn ninkii maalintuu xilka la wareegayay fagaare uga dhawaaqay in ciidamada itoobiya, ugandha, burundi, kenya iyo itoobiya qaarkood naftooda u hureen oo u dhinteen umadda soomaaliyeed danteeda waa siduu warkuu dhigaye asigoo meesha ka saaraya in ciidamadaasu yihiin cadaw dalka iyo dadka iyo diinta jiritaankooda diidan, isla markaana qarinaya kumanaankii soomaalida ahaa ee ay xasuqeen?.
Waa asigii waxaanuu maray dariiqii kuwii asiga ka horeeyay ee sandareertada iyo jagada u xilanayay kalana ahaa xasan sheekh maxamuud, shariif sheekh axmed iyo cabdulaahi yuusuf axmed.
Miyaanuu ahayn ninkii safiirka maraykanka ee soomaaliya fadhiya uu gudoonsiiyay hadiyad uu soo dhiibay Donald trump madaxweynaha maraykanka ee cunsuriga ah kuna caan baxay islaam naceybka?
Waa asigii waxayna ila tahay in sababta hadiyadda siiyayu tahay in uu qabtay qayb ka mid ah shaqadii loo wakiishay sidaa aawgeedna uu abaal marin mudeystay lana damacsan yahay inta harsana in uu u tafa xeyto.
Qofka soomaaliga ah ee maskaxdiisu fayowdahay ee aan xiska laga biliqeysan wuxuu dareemayaa in ninka taangiga soo duulayaasha horarka ah saaranu yahay masaartii ama godontii gondihiisa iyo laf dhabartiisa lagu jari lahaa.
ugu dambeyn waxan oranayaa farmaajo waa maqaar saar marin habaabin ah taladuna ma ahan mid asiga goâ€™da laakiin waa askari fuliya howshii loo diro, sidaa aawgeeed dadka soomaaliyeed waa in aanay ku dagmin ayna ogaadaan in asiga iyo hogaamiyaasha kale ee soomaalida ah ee shisheeyaha ku daaban u xilsaaran yihiin sidii soomaaliya u noqo lahayd meel reer galbeedku khayraadkeeda la baxo aakhirkana kenya iyo itoobiya si rasmi ah loogu qeybiyo.
Shareecada nin fowdiyo u qaba fin iyo boog daahay,
Ibliis furundugleyn baa arladi soo fakoocsadayâ€™e,
fidma walaha soo fooganee faasaq iyo tuuga,
Fasaad iyo waxaa loo igmaday feyrus gaalnimoâ€™e,
Fariidkiyo fogaan aragiyo weliba foolaadka,
Fahma qabaha waa diidayaa faalla bixiyaaye,
Fara gelin shisheeyuhu wadoow foox u shidayaaye,
Waa fanaan u heesoo kaloo una far jaawshaaye,
Shaarubada ninkaa firinayee farac maraykaana,
Fikradaha taraamuu sidaa oo fasaxayaaye,
Gobanimada uu sii fogeyn waa la soo furanâ€™e,
Farmaajiyo intii raacda ee ficil yuhuudeed leh,
Waa in faasku gooyoo rasaas lagu faruuraaye.
Waxaa diyaariyaya Cabdulaahi soomaali